WAR-MURTIYEEDKA Shirka Istraatejiyada Warbaahinta Soomaaliya | kowtharmedia.com
Home WARAR WAR-MURTIYEEDKA Shirka Istraatejiyada Warbaahinta Soomaaliya
WAR-MURTIYEEDKA Shirka Istraatejiyada Warbaahinta Soomaaliya
SOOMAALI: Warmurtiyeed Istraatejiyada Warbaahinta
ENGLISH: Communique SMDS 12 January 2016
Muqdisho 11 – 12 Janaayo 2016
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abdi Hayir (Mareye), Wasiirada Warfaafinta ee dawlad goboleedyada xubnaha ka ah Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay la jiraan ururadda ay ku mideysan yihiin weriyayaasha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee Warbaahinta taageera ayaa ku kulmay Jazeera Palace Hotel ee Muqdisho 11kii iyo 12kii Janaayo 2016. Shirka waxaa shir gudoominayey Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Ka qeybgalayaasha shirku waxey u mahadceliyeen Wasaarada Warfaafinta Dowladda Federaalka iyo Wasaaradaha Warfaafinta Dowlad Goboleedyada, waxeyna soo dhoweeyeen una mahadceliyeen doorka Hay’adaha IMS/Fojo, UNESCO, SMSG iyo xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM oo taageeray shirkan muhiimka ah. Sidoo kale waxey uga mahadceliyeen IMS/Fojo doorkooda ku aadan diyaarinta barnaamijka, qorshaha istraatejiyada horumarinta warbaahinta iyo soo ururinta macluumaadka muhiimka ah ka dib booqashooyinkii ay ku kala bixiyeen gobollada dalka.
Ka qeybgalayaashu waxey dib u eegis ku sameeyeen isla markaasna ay isku waafaqeen in la dhaqangeliyo Istraatejiyada Horumarinta Warbaahinta Soomaaliya ee 5ta sano ee soo socota (2016 – 2020).
Ka qeybgalayaashu waxey ku ballameen inay si wadajir ah u wada dhaqangeliyaan Istraatejiyada, iyagoo kaashanaya shacabka, suxufiyiinta Soomaaliyeed, ururada matala warbaahinta iyo beesha caalamka. Waxaana marwalbo door hoggaamineed iyo isku xir qaadanaya Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyadoo la tashaneysa Dowlad Goboleedyada, iyo qeybaha kale ee warbaahinta madaxa bannaan.
Ka qeybgalayaashu waxey ku heshiiyeen inay yeeshaan wadashaqeyn buuxda oo dhan walba ah sida diiwaangelinta hay’adaha warbaahinta ka howlgala dalka, sharci siinta hay’adahaas, iyo inay xiriir wanaagsan ka yeeshaan arrimaha deegaan walba ku soo kordha. Waxaana hoggaanka iyo isku xirka marwalba leh Wasaarada Warfaafinta ee Dowladda Federaalka.
Ka qeybgalayaashu waxey soo dhoweeyeen Xeerka Saxaafadda ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, iskuna raaceen in uu noqdo kan rasmiga ah oo Dowlad Goboleedyadana ay si buuxda u waafajiyaan xeerarkooda saxaafada.
Ka qeybgalayaashu waxey isla garteen in dhaqangelinta Xeerka Saxaafadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga wada shaqeeyo, bacdamaa xeerku uu maareeynayo cabashooyinka iyo habdhaqanka shaqsiyaadka ama hay’adaha warbaahinta ee ku xadgudba xeerka saxaafada, anshaxa iyo asluubta warbaahinta. Waxaana la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay in dhammaan dalka laga sameeyo wacyigelin lagu sharaxayo muhiimada dhaqangelinta xeerka saxaafadda. Fulinta barnaamijkan waxaa laga codsay hay’adaha warbaahinta taageera iyo beesha caalamka in ay gacan ka geystaan dhaqangelinta Xeerka Saxaafadda.
Ka qeybgalayaashu waxay isla qiimeeyeen duruufaha ay ku shaqeeyaan weriyayaasha iyo guud ahaan warbaahinta Somaaliyeed, waxayna ammaaneen horumarka laxaadka leh ee ay sameynayso warbaahinta Soomaaliyeed. Waxayna xaqiijiyeen in dawladda Soomaaliya ay ka go’an tahay ilaalinta xoriyadda Saxaafadda iyo xoriyatul qowlka sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka KMG ah.
Ka qeybgalayaashu waxay cambaareeyeen ficilada dilka, dhaawaca iyo hanjabaadaha ah ee kooxaha argagixisada ah ku hayaan weriyayaasha iyo warbaahinta Soomaaliyeed, iyo xariga sharci darada ah, waxayna ciidamada amniga ugu baaqeen in ay gacanta ku soo dhigaan dembiilayaasha oo sharciga la hor keeno.
Ka qeybgalayaashu waxay amaan iyo mahadcelin u jeediyeen dawladaha iyo hay’adaha taageera warbaahinta Soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen in ay sii xoojiyaan taageeradooda xiligan warbaahinta Soomaaliyeed gelayso marxaladda cusub.
Ka qeybgalayaashu waxay ugu baaqeen hay’adaha iyo ururada taageera warbaahinta Soomaaliya ama ka shaqeeya arimaha warbaahinta in ay iska diiwaangeliyaan Wasaaradda Warfaafinta ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ay ka hawlgalaan una gudbiyaan profile-kooda iyo qorshe hawleedkooda oo dhameystiran iyo miisaaniyada ay ku howlgalayaan.
Ka qeybgalayaashu waxey soo jeediyeen in Dowladda Federaalka lagala tashto dhammaan mashaariicda warbaahinta ee hay’adaha caalamku ay ka fulinayaan dalka, oo aysan hay’ad ka howlgeli karin dalka iyagoon oggolaansho ka helin Dowladda Federaalka iyo Dowladda Goboleedyada ay ka howlgalaan.
Ka qeybgalayaasha waxey xuseen in Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ku midoobaan horumarinta warbaahinta dalka iyo wacyigelinta bulshada, sida Dastuurka, nidaamka federaalka, doorashooyinka, amniga, dib-uheshiinta, iyo Dowlad-wanaaga. Waxaana la isla gartay in si mideysan oo xilkasnimo leh looga wada howlgalo iyadoo Wasaarada Warfaatina ay door hoggaamineed ku yeelaneyso.
Ugu danbeyntii ka qeybgalayaashu waxey ka codsadeen hay’adaha caalamka iyo dowladaha taageera Horumarinta Warbaahinta Soomaaliya in Shir Deeqbixiyeyaasha ah lagu qabto Nairobi sida ugu dhaqsiyaha badan si loo codsado dhaqaalaha lagu fulinayo Istraatejiyada iyo Xeerka Saxaafada. Waxaana loo xilsaaray Wasaarada Warfaafinta Dowladda Federaalka iyo IMS/Fojo isku xirka, xiriirinta iyo hirgelinta go’aanada shirka iyo shirka deeqbixiyeyaasha ee Nairobi.
National Conference for Somali Media Development Strategy
Mogadishu, 11 – 12 January 2016
Previous PostWafdi Uu Hogaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Si Weyn Loogu Dhaweeyey Kismaayo Next PostTaliyaha Ciidammada Booliiska Soomaaliya Oo La Kulmay Dhigiisa Dalka Turkiga